Randriafeno Daniella – Filoha vaovao: misy marina ny fanovana ao amin’ny LC Farafangana | NewsMada
Randriafeno Daniella – Filoha vaovao: misy marina ny fanovana ao amin’ny LC Farafangana
Voafidy ho filoha hitantana ny Lions Club Farafangana izao, Rtoa Randriafeno Daniella, efa-taona taorian’ny naha mpikambana azy. « Adidy lehibe ny miandry ahy amin’izao toerana izao, miaraka amin’ny LC Farafangana sy ny fianakaviamben’ny LC maneran-tany. Fandraisana andraikitra izao toerana izao koa isaorako ihany koa ny vitan’ireo namana rehetra teo aloha. », hoy Randriafeno Daniella.
Nisaoran’ny filoha vaovao manokana i Rosie Dominique, nitantana ny LC Farafangana ny taona 2017 hatramin’ny 2018, namindra ny faneva amin-dRandriafeno Daniella. Maro ny vitan’io filoha teo aloha io teo amin’ny fampandrosoana ny faritra, ny lafiny toekarena. Io filoha teo aloha io ihany no mbola mpandrindra ny asa rehetra amin’izao, manohy ny fiaraha-miasa.
Mipetraka mazava ny rafitra sy ny asa ataon’ny LC, ary misy ny fanovana ankehitriny, koa raha eto Farafangana, atomboka amin’ny fifampitokisana sy ny firaisan-kina ny fanampiana ireo havana ao anatin’ny fahasahiranana sy ny fahantrana.
“Manatanteraka ny tanjona apetraka”
“Tiana ho fantatry ny taranaka rehetra ny hoe inona izany Lions izany ? Manatanteraka ny tanjona apetraka sy manaja ny fitsipika rehetra. Toe-tsaina aloha izany ny voalohany, mitondra fanampiana, tambajotra iray mitovy faniriana », hoy Randriafeno Daniella. Karazany maro ireo tetikasa hotanterahina mandritra ny iray taona, hampahafantarina ny volana aogositra, mandritra ny fivorian’ny mpikambana ; ny 25 sy ny 26 aogositra ihany ny fanangonana ny ezaky ny rehetra. Mpikambana avy amina sehatra samihafa ny ao amin’ny LC Farafangana, koa matoky ny fiaraha-miasan’izy ireo feno ny filoha vaovao.
Voafidy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny filohan’ny LCI, Rtoa Gudrun Yngvadottir, vehivavy voalohany amin’izany toerana izany, hatramin’ny niorenan’ny LCI, ny taona 1917.